रोनाल्डो अनि विश्वकप ! - Khelpati
रोनाल्डो अनि विश्वकप !
विराज न्यौपाने ।
एजेन्सी । 'रोनाल्डो' विश्व फुटबल जगतले कहिल्लै बिर्सन नसक्ने नाम हो । चाहे त्यो ब्राजिलियन स्ट्राइकर रोनाल्डो होस् या पोर्चुगिज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ।
यी दुवै खेलाडीले आफ्नो समयमा जादुमय प्रदर्शन गरे । आफ्नो टिमलाई जित दिलाउन माहिर खेलाडीको रुपमा विश्वमा चिनिए ।
परिवर्तनशील समयमा एक रोनाल्डोको सन्याससँगै विश्व फुटबलमा अर्को रोनाल्डोलाई जन्म दिए । अर्थात् ब्राजिलियन रोनाल्डोको सन्याससँगै विश्व फुटबलले पोर्चुगिज रोनाल्डो पाए ।
पोर्चुगिज रोनाल्डोले मैदानमा जादुमय प्रदर्शन गरिरहदा ब्राजिलियन रोनाल्डोले बुट थन्काएको करिब १० वर्ष पुगिसकेको छ ।
४३ वर्षीय ब्राजिलियन लिजेण्ड रोनाल्डोले आफ्नो खेल जीवनमा ४ विश्वकप खेलेका छन् । तर, ३ विश्वकपमा मात्र मैदान उत्रन पाए । जसमा २ पटक च्याम्पियन, एक पटक सर्वोकृष्ट खेलाडी र एक पटक सर्वाधिक गोलकर्ता चुनिएका थिए ।
रोनाल्डोले सन् १९९४, १९९८, २००२ र २००६ को विश्वकप खेलेका थिए । जर्मन विश्वकपपछि ब्राजिलको टिमबाट खेलेपनि सन् २०१० को विश्वकपमा भने टिममा स्थान बनाउन सकेनन् । र, त्यसको एक वर्षपछि रोनाल्डो सम्पूर्ण खेल जीवनबाट सन्यास घोषणा गरेका थिए ।
सन् १९९४, अमेरिका -
सन् १९९४ को जुलाईमा आयोजना भएको १५ औं संस्करणको फिफा विश्वकप अमेरिकाले आयोजना गरेको थियो । कुल २४ राष्ट्रको सहभागिता भएको यस विश्वकपमा ब्राजिल समूह 'बी' मा रहेको थियो ।
ब्राजिलको विश्वकप टिममा पहिलो पटक परेका थिए, युवा स्ट्राइकर रोनाल्डो । जतिबेला उनी मात्र १८ वर्षका थिए ।
समूह चरणबाटै अपराजित रहेको ब्राजिलले फाइनलमा इटालीलाई टाइब्रेकरमा ३-२ ले पराजित गर्दै चौंथो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । तर, युवा स्ट्राइकर रोनाल्डोले त्यस विश्वकपमा मैदान उत्रन भने पाएनन् । उनी बेन्चमा सिमित बने । बेन्चमा सिमित भएपनि रोनाल्डो विश्वकप टोलीका एक सदस्य बनेका थिए । १८ वर्षकै उमेरमा विश्वकप उपाधि जित्न सफल भए ।
सन् १९९८, फ्रान्स -
फिफा विश्वकप फुटबलको १६ औं संस्करण फ्रान्समा आयोजना भएको थियो । सन् १९९८ को जुलाईमा आयोजना भएको त्यस विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले लिगकम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
फ्रान्स विश्वकपमा साविक विजेता ब्राजिल समूह 'ए' मा रहेको थियो । ब्राजिलियन टिममा सबैको नजर रोनाल्डोमा थियो । रोनाल्डोले पहिलो पटक सुरुवाती-११ मा पर्दै विश्वकप खेल्दै थिए ।
पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै रोनाल्डो रहेको टिम ब्राजिलले सुखद सुरुवात गरेको थियो । पहिलो खेलमा भने रोनाल्डोले गोल गर्न सकेनन् ।
तर, दोस्रो खेलबाट रोनाल्डोले आफ्नो लय समाते । मोरक्कोविरुद्धको दोस्रो खेलमा ३-० को जित निकाल्दा रोनाल्डोले नवौं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए ।
एक पछि अर्को सुन्दर खेल पस्कदै रोनाल्डोले ब्राजिललाई विश्वकपको फाइनलमा पुर्याउन सफल भए ।
यस पटक पनि सबैले सोचेको थियो कि रोनाल्डो रहेको ब्राजिलले विश्वकप जित्छ । तर, सबैले सोचेजस्तो भएँन । फाइनलमा ब्राजिल आयोजक फ्रान्ससँग ३-० ले स्तब्ध हुँदा पुन: विश्व विजेता बन्न चुकेको थियो ।
फ्रान्स विश्वकपमा कुल ४ गोल गरेका रोनाल्डोले व्यक्तिगत रुपमा भने ठुलो सफलता हात पारे । उनी यस विश्वकपको सर्वोकृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए ।
सन् २००२, जापान/कोरिया -
विश्वकप फुटबलको १७ औं संस्करण जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको थियो । विश्वकप फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक एसियाली राष्ट्रले विश्वकप आयोजना गरेको थियो ।
यस विश्वकपमा ३२ टोलीको सहभागिता रहेको थियो । समूह 'सी' मा रहेको ब्राजिलले पहिलो खेलमा टर्कीसँग खेलेको थियो । त्यस खेलको ५० औं मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्दै विश्वकपमा गोलको खाता खोलेका थिए । जुन खेल ब्राजिलले २-१ ले जितेको थियो ।
समूह चरणमा चीनविरुद्ध ४-० तथा कोष्टारिकाविरुद्ध ५-२ गोलको जित निकालेको ब्राजिल समूह विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा गएको थियो ।
प्रि-क्वाटरफाइनलमा रोनाल्डो र रिभाल्डोको एक एक गोलको मद्दतमा ब्राजिलले चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी बेल्जियमलाई २-० ले हराएको थियो ।
क्वाटरफाइनलमा इंग्ल्यान्ड र सेमिफाइनलमा टर्कीलाई हराएर ब्राजिल फाइनल पुगेको थियो । फाइनल पुग्ने अर्को टिम थियो जर्मनी । जर्मनीमा माईकल बालक, ओलिभर कान,मिरोस्लाभ क्लोज जस्ता खेलाडीले भरिएको थियो ।
ब्राजिलका लागि जर्मनीलाई हराउँनु ठुलो चुनौती थियो । त्यसमध्ये मुख्य चुनौती समूह चरणमा एक गोल मात्र व्यहोरेका गोलकिपर ओलिभर कानविरुद्ध गोल गर्नु । त्यसैले फाइनललाई 'उत्कृष्ट फरवार्डविरुद्ध उत्कृष्ट गोलकिपर' को खेलको संज्ञा दिईएको थियो । विश्व फुटबलप्रेमीको ध्यान फाइनलमा थियो ।
जुन, ३० योकोहोमा स्टेडियम । करिब ६९ हजार दर्शक । फाइनलमा ब्राजिल र जर्मनी । फाइनल खेलाउने जिम्मा पाएका थिए इटालियन रेफ्री पिरलूगु कोलिनले ।
निकै रोमान्चक बनेको फाइनलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो । दोस्रो हाफमा नायक बने रोनाल्डो ।
खेलको ६७ औं मिनेटमा रिभाल्डोले डिबक्स बाहिरबाट गरेको कडा प्रहारलाई जर्मनीका गोलकिपर कानले क्लियर गर्न नसक्दा अनमार्क रहेका रोनाल्डोले पोस्टको जाली चुमाउदै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो गोल गरेको १२ मिनेट नबित्दै रोनाल्डोले ७९ औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै ब्राजिललाई २-० को जितसहित विश्व च्याम्पियन बनाए।
ब्राजिललाई उपाधि दिलाउन कुल ८ गोल गरेका रोनाल्डो सर्वाधिक गोलकर्ता चुनिएका थिए ।
सन् २००६, जर्मनी -
विश्वकपको १८ औं संस्करण जर्मनीमा आयोजना भएको थियो । तर, रोनाल्डोको अन्तिम विश्वकप रहेको प्रतियोगितामा ब्राजिल क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिएको थियो ।
कुल ३२ राष्ट्र सहभागी यस विश्वकपमा ब्राजिल समूह 'एफ' मा रहेको थियो । समूह चरणको पहिलो खेलमा ब्राजिलले क्रोएसियालाई १-०, अष्ट्रेलियालाई २-० र जापानलाई ४-१ ले हराएको थियो । समूह विजेता बनेको ब्राजिलका लागि रोनाल्डोले मात्र जापानविरुद्ध २ गोल गरेका थिए ।
अन्तिम १६ मा घानालाई ३-० ले पराजित गर्दा रोनाल्डोले थप एक गोल गरेका थिए । तर, क्वाटरफाइनलमा ब्राजिल फ्रान्ससँग स्तब्ध भयो ।
सन् १९९८ को विश्वकपमा फाइनलमा पराजित भएको ब्राजिलले फ्रान्ससँग जर्मनीमा बदला लिने अनुमान गरिएको थियो । तर, फ्रान्सका स्ट्राइकर थिएरी हेनरीले ५७ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गर्दा ब्राजिल पुन: बदला लिन चुकेको थियो । र, लगातार तीन पटक फाइनल खेलेको, २ पटक च्याम्पियन बनेको टोली ब्राजिल अन्तिम आठबाट बाहिरिएको थियो ।
ब्राजिल अन्तिम आठबाट बाहिरिएपनि रोनाल्डोले यस एक कीर्तिमान बनाएका थिए । घानाविरुद्ध गोल गर्दै रोनाल्डोले विश्वकपमा आफ्नो गोल संख्या १५ पुर्याउदै जर्मनीका गर्ड मुलरको नाममा रहेको विश्वकपमा सर्वाधिक १४ गोलको कीर्तिमान भङ्ग गरेका थिए । तर, पछि रोनाल्डोको कीर्तिमान जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजले १६ गोल गर्दै तोडेका थिए ।
एन्फा अध्यक्षविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयलमा उजुरी